९ घण्टाका लागि ९ रेक्टरको चर्चा
काठमाडौं । आर्थिक विकास, कनेक्टिभिटी, रोड एण्ड बेल्टमा नेपालको सहभागिता खोज्दै नेपाल चीन मित्रता बलियो पार्न र नेपालको स्वाधीनतामा उभिने क्षमता बढाइदिनसमेत चीनका उपप्रधानमन्त्री स्तरका विदेशमन्त्री वाङ यी आइतवार नेपाल आएका छन्, राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमण एजेण्डाहरु समेत निश्चित गरेर उनी आजै फर्कने छन् । राष्ट्रपतिको भ्रमण मिलाउने चीनको विशेष टोली अहिले नै नेपाल आइसकेको छ ।
१९९६ मा चीनका राष्ट्रपति जियाङ जमिन नेपाल आएका थिए । त्यो समय राजा वीरेन्द्र जमाना थियो । नेपालको व्यक्तित्व र वीरेन्द्रको राजनेताको हाइट नै अग्लो थियो । त्यसको २४ वर्षपछि नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा भारत–पश्चिमाले गाँजेर नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने र चीनको बिआरआई रणनीतिमा धक्का लाग्ने देखेर चीन सशंकित हुँदै ९ घण्टाका लागि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ असोज अन्तिम साता नेपाल आउने छन् । तर भारतीय मिडियाहरु यो भ्रमण रद्द भएको प्रचार गर्दैछन् ।
केही वर्ष अघि चीनका प्रधानमन्त्री ४ घण्टाका लागि नेपाल आएका थिए । महाशक्ति चीनका राष्ट्रपतिको आसन्न चीन भ्रमण किन ? के लिएर आउनेछन्, नेपाल नीति के हुनेछ ? भारत र अमेरिकाकालागि चासो बनेको देखिन्छ । चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण दक्षिण एसियाको शान्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिदैछ ।